PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-08-27 - Ezempilo zibhekene nengwadla
Ezempilo zibhekene nengwadla
KUBALULEKILE ukuthi isukunyelwe indaba yokuntengantenga komnotho lapha eNingizimu Afrika ngoba inomthelela omubi kakhulu kuwona wonke umuntu.
Embikweni weSA Health Review
2017 ophume ngoLwesithathu, kuvela isithombe esingesihle ngomkhakha wezempilo kuleli. Ngokwalo mbiko izikhungo zezempilo kuleli ziyehluleka ukuhlinzeka ngosizo lwezempilo kubantu. Lokhu kuholela ekutheni abantu basheshe bafe isikhathi singakafiki nokuyinto encike kakhulu emnothweni. Ukungabi namali kuhlangene kakhulu nokuthi abantu babulawe yizifo abebengakwazi ukuphila nazo ukube imithi ayibizi kakhulu.
Akuzona izindaba ezimbi kuphela ezivezwe yilo mbiko njengoba kuvela ukuthi isikhathi okulindelwe ukuthi siphilwe ngabantu sinyuke ngeminyaka eyishumi. Ukusetshenziswa kwezimali kwezokwelapha kuzonyuka ngo-1.1% onyakeni wezokwelapha ka-2018/19.
Imali okuxhaswa ngayo ezempilo iyancipha. Imithi inyuke kakhulu intengo yayo, lokhu kwenzeka ezomnotho zakuleli zithwele kanzima. Njengoba imithi eminingi ikhiqizwa emazweni aphesheya, ukuyiletha kuleli kumba eqolo, nokwenziwa kabi kakhulu ukuntenga kwamandla erandi uma liqhathaniswa ne-dollar laseMelika.
UMnuz Mark Bletcher wehhovisi likamgcini-mafa ukhala ngokuthi noma kulindeleke ukuthi ukhule umnotho nokuyinto ezogqilaza abaningi kwezezimali, iNational Health Insurance (NHI) ingase ibatakule kancane abathwele kanzima ngokwenziwa kwemali ekhokhelwa ezokwelapha. UBletcher nozakwabo bakhombe nenkinga yokungavalwa kwezikhala ezivuleka ngokushiya kwabasebenzi. I-SAHR iveza ukuthi kunezikhala zabasebenzi abangu-5 500 ezingavalwa. Kukhona nongoti abashiya phansi baye emadlelweni aluhlaza izikhala zabo zingavalwa. Lokhu kubonakele kwenzeka eKZN ebhekene nenkinga yeziguli ezinomdlavuza.
Nakanjani lesi yisimo okufanele sisukunyelwe ngokushesha. Ukuhamba kwabasebenzi abanamava kudinga ukuthi kunqandwe. Kubalulekile nokuthi uhulumeni ayicabangisise eyokutakula ngezigidi izinkampani zawo ezilahla imali, ibe incipha imali esetshenziswa entweni ebaluleke kangaka njengokwelapha.